Ny Austrian Airlines dia mampiato ny asany hatramin'ny 19 martsa
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Austrian Airlines dia mampiato ny asany hatramin'ny 19 martsa
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Austria • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Hampiato ny sidina rehetra eo anelanelan'ny 19 martsa sy 28 martsa ny Austrian Airlines noho ny Coronavirus.
Austrian Airlines dia mpikambana ao amin'ny Star Alliance sy Lufthansa Group. Lufthansa rehetra dia hampihena ny fahafaha-manao 20% indray ary nifantoka tamin'ny fitondrana Alemanina an'arivony nody taorian'ny fitsangantsanganana sy fialantsasatra.
Ny OS066 dia hipetraka any Wina amin'ny 19 martsa amin'ny 8.20 maraina avy any Chicago ary izy no sidina farany miasa hatramin'ny 28 martsa.
Ireo mpandeha efa namandrika dia haverina amin'ny zotram-piaramanidina hafa.
Ho fanampin'izany, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Lufthansa Group dia hampihena ny fandaharam-potoanan'izy ireo mandritra ny fotoana fohy sy maharitra. Ireo fanafoanana, izay havoaka vao maraina rahampitso 17 martsa, dia hitarika fihenam-bidy lehibe amin'ny serivisy lava-be indrindra any Afovoany Atsinanana, Afrika ary Amerika Afovoany sy Amerika Atsimo. Amin'ny ankapobeny, ny haben'ny fipetrahan'ny Vondrona Lufthansa amin'ny làlana lavitra dia hihena hatramin'ny 90 isan-jato. Fifandraisana 1,300 isan-kerinandro no nokasaina hatao amin'ny fahavaratra 2020.
Ao Eropa dia hihena ihany koa ny fandaharam-potoanan'ny sidina. Manomboka rahampitso, manodidina ny 20 isan-jaton'ny fipetrahana efa nomanina tany am-boalohany no mbola hatolotra. Tamin'ny voalohany, sidina fohy 11,700 2020 isan-kerinandro no kasaina ho an'ny fahavaratra XNUMX miaraka amin'ny kaompaniam-pitaterana Lufthansa Group.
Hivoaka mandritra ny andro vitsivitsy ny fanafoanana fanampiny ary hampahafantarina amin'izany ny mpandeha.
Na eo aza ny fanafoanana goavana, Lufthansa, Eurowings ary Austrian Airlines dia nanomana sidina manokana mihoatra ny 20 miaraka amin'ny vahiny 6,000 mahery amin'ny fampandrenesana fohy mba hampandehanana ireo mpandeha an-dranomasina sy mpamaky fialan-tsasatra hody. Ny fiaramanidina midadasika, ny Boeing 747 & 777 ary Airbus A350 no ampiasaina hanolotra faran'izay betsaka araka izay tratra amin'ireo sidina miverina ireo. Hatramin'ny olom-pirenena Alemanina, Aostraliana, Suisse ary Belzika an'arivony maro no mbola miandry ny hiverina any amin'ny tanindrazany, ny kaompaniam-pitaterana vondrona Lufthansa Group dia nanao fandaharana ho an'ny sidina fialana lavitra ary mifandray akaiky amin'ny governemanta any amin'ny tanindrazany momba izany. Carsten Spohr, Filohan'ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG, dia nilaza hoe: "Tsy resaka olana ara-toekarena intsony izao, fa momba ny andraikitra raisin'ireo kaompaniam-pitaterana an-tsokosoko ho ampahany amin'ireo fotodrafitrasa goavambe any amin'ny fireneny." Lufthansa dia hiara-hiasa amin'ny seranam-piaramanidina sy ny mpanara-maso ny fifamoivoizana an-habakabaka mba hamolavola foto-kevitra mirindra amin'ny fitazonana ireo fotodrafitrasa tena ilaina.
Ny fandaharam-potoana vaovao ho an'ny seranam-piaramanidina rehetra an'ny Lufthansa Group dia manan-kery hatramin'ny 12 aprily 2020. Ny mpandeha Lufthansa Group izay mikasa ny hanao fitsidihana mandritra ny herinandro ho avy dia notoroana hevitra mba hijery ny satan'ny sidina misy azy ireo ao amin'ny tranonkalan'ny fiaramanidiny alohan'ny hiaingany. Raha misy ny fahafaha-miverina mamily, ny mpandeha voakasik'izany dia hampandrenesina mavitrika momba ny fomba hafa, raha toa ka nanome ny antsipirian'ny fifandraisany an-tserasera izy ireo. Ho fanampin'izany, ny fepetra fanovana rebooking izay niova dia mihatra amin'ny finiavana tsara. Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba izany ny mpanjifa ao amin'ny lufthansa.com.
Izahay izao dia mahazo antso an-tariby be dia be amin'ny mpanjifa ao amin'ny Ivotoerana Serivisy sy ny gara misy anay. Miasa hatrany amin'ny fampitomboana ny fahafaha-manao hamaly izany fangatahana izany izahay. Na eo aza izany dia misy fotoana fiandrasana lava ankehitriny. Ireo mpandeha dia afaka mampiasa ny safidin'ny fanovana indray sy manompo tena azy amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina ho toy ny alternatera ho an'ny Ivotoerana Serivisy.
Tsy toy ny kaompaniam-pitaterana mpandeha, ny Lufthansa Cargo dia mbola afaka nampandeha ny sidina rehetra nomaniny afa-tsy ny fanafoanana an'i Shina tanibe. Ny sampana Lufthansa Group dia hanohy hanao izay rehetra azony atao mba hitazomana ny fivezivezin'ny sidina ho an'ny fiaramanidiny manokana ary hanohana ireo rojom-pamokarana eran-tany. Indrindra mandritra ny krizy ankehitriny, ny lozisialy ary koa ny zotram-pitaterana an-habakabaka no zava-dehibe indrindra.